allsanaag.com - Doorasho Fashil ku Dhamaatay
Laascaanood waxay xukunka Isaqland ama Soomaaliyadiid ku dhacday 15-10-2007. Waxay dulmi ku jirtay:	3206	Days	06	Hours	04	Minutes	58	Seconds	Horjoogaha Soomalidu Ma Danaystaa? Ma Daryeelaa?
Doorasho Fashil ku Dhamaatay
Written by Shanle	Allsanaag: Doorashadii muddada dheer la soo dhoodhoobayay ee maamulka Hargaysa ayaa ku dhamaatay ku shubasho aad u sareesa oo xitaa waxey dhaaftay doorashooyinkii ka dhacay meelo badan oo adduunka ah oo si baahsan loogu shubtay. Dad badan oo lagu qafilay gooni isku taaga aan sida cilmiyaysan looga fakirin ayaa aad uga xumaaday sida loogu shubtay ee arxan darada ah. Dadka ku abtirsada maamulka Isaqland ayaa ah iyagu dhibanayaan siyaasadeed oo muddo dheer lagu seexin jiray in aqoonsigii uu soo bislaanayo, laakiin taas ay u muuqato mid aan shaqeeneen.
Mar shalay uu qabtay shir Dr. Gabooso ayuu ku sheegay in dimuqraadiyadii maamulka Isaqland ay dhimatay ayna sugayso in lagu aaso qabuuraha. Si kastaba ha ahaatee, dadka caqliga u saaxiibka ah wey arkayeen in beel meel isku soo go’doomisay oo aqoonsiga mooday wax suuqyada looga helayo qiima jaban aysan soconeen.